DHALOOTA ITITE!- Kulaa Jiloo Xachee Jimma University,College of Agriculture and Veterinary Medicine, – Beekan Guluma Erena
DHALOOTA ITITE!- Kulaa Jiloo Xachee Jimma University,College of Agriculture and Veterinary Medicine,	Beekan Erena
126SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Dhalatan dhalchan;dhalchan bakka of buusan. Fakkaataa kee kan dhiiga kee irraa kalaqame;kan yoo sitti aggatan(aggaaman)rifatu kan yoo si rukutan dhiigu dhallii kee…..kan bakka si bu’us isuma. Eeyyee dhalatan malee hin dhalchan;dhalchan/dhalan malees bakka of hin buusan. Garuu,dhalachuun ykn dhaluun qoftii gahaa miti. kan dhalu dhaluu waan danda’uuf qofaa miti kaayyoo qaba. Dhaluun ammoo galma isa dhumaa miti dhalachuunis akkasuma yoo gaaddisa ofii dhalchan; yoo galma dhalataniif gahan malee.
Kan gaafa gammachuu qofa ililchu,kan ijjii imimmaanii roobsitee onneen gammachuu facaastu osoo hin ta’in kan yoo qormaannii du’aan boodaas jiraate sii wajjiin qoramu fakkaattiin;bakka bu’aa fi gaaddisnii. Kun hin ta’u taanaan maseenuunis filannoo tokkoodha. Hundumaafuu dhaloota gaafa jennu sadarkaa garaa garaa qabachuu ni mala. Tokkoon tokkoon keenya maatii keenyaaf,biyya keenyaaf darbes addunyaafis dhaloota kan deemsa abbootii keenya irraa dhaalle guutuu taasisnu. Garuu,dhaloonnii har’aa dhaloota eessa ture?dhaloota amma eessa jiru?dhaloota fuulduraaf eessatti deemu? “Jibbicha korma ta’u haada irratti beekan”jetti maanguddoon yoo mammaaktu.kanaan dura cabaaluqoota garaa garaa irraa kan ka’e yoo tokko oobjatu innii kaan oobjachuu mitii hin rafneeyyuu ta’a. oobjuunis duddaa fi garaa turte wal hin simtu.yoo kaan dammaqu ammo kaan ni huursa(kurruufa) hirriibaan booji’amee.garuu,kan akka rafetti hafu reeffa qofa.
Amma qilleensii barii bubbisuu eegaleera;haallii ciisichaas waan tolaa jiru hin fakkaatu. Kaa hirribaa dammaqee ofiin gunguma,innii kaan iddoo ciisichaa jijjiiratee waan iddoo isa jijjiirsise sana yaada dhiphuu,gadadoo,rakkina: fulaa isaatti deebi’uufis hiikee hidha. , kaan idduma ciisutti asii achi gargaggala,kaan of hooqa wahittuu nyaataa jira wahittuu hirriiba dhorke. Hunduu dhunfaan dhiphata.yaada isaanii walitti ibsachuuf amantii guutuu wal irraa hin arganne. garuu waan tokkoon wal fakkaatu:gadadoo yaadu furmaata wixinu.yaadnii isaanii iddoo tokkotti waan nanna’aa jiru fakkaata.
Abjuun duddaa fi garaa turtes har’a yoo tokko abjuun aduu argu innii duraan faallaa isaa dukkana roobaa oobjatu baatii (ji’a) oobjachuu eegaleera!..”kun kiyya moo kiyyaa miti?”,”kun ana moo anaa miti?”gaaffiileen jedhan gaaffii xiinsammuu turan amma garuu haa ta’us haa baatuus gaaffii akkasii kaasuun qaanii ta’aa waan dhufe fakkaata. Dhaloonnii kun waan hedduun wal akkeessaa jira: hidhii wal ilaalaa jira(“afaan kam haasa’aa jira/ti?”),maqaa wal xiinxalaa jira(“maqaan kee Caaltuudhaa?,Boruudhaa? Galmoodhaa?maqaa bareedaa qabda!”) ,harka wal ilaalaa jira(micciiraa,gumee) uffatas akkasuma. kana males yoo dubbatu,yoo barreessuus ta’ee yoo yaadu handhurtii isaa waan walitti jirtu fakkaatti;walitti jirtis. Dhiiga tokko,hawwii tokko qabu. Ulmaa(deessuu)fulaa tokkoottuu dhukkubaa akkuma jedhani;dhaloonnii kun ititee waan wal gula deebi’e fakkaata. Kanaafuu,dhalootnii kun jijjiiramaa jiraa laata?? Isaniif dhiisa!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa126SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DHAAMSA HATATTAMAA HAWAASA OROMOO BIYYA KEESSAAFI ALA JIRAATAN MARAAF. Dubbifamuu Qaba
HAADHA NA DEESSEEF GARUU NAN GADDA!-Muktaar Abdalla Yaasin →